Momba anay - Shijiazhuang Huabang Imp&Exp Trade Co., Ltd.
Shijiazhuang Huabang Imp.&Exp. Trade Co., Ltd. dia sampan'ny Shijiazhuang Huabang mineral products Co., Ltd. Izay matihanina orinasa mineraly amin'ny fampidirana ny fitrandrahana, ny famokarana, ny fanodinana ary ny varotra. Ao amin'ny faritanin'i Lingshou, faritanin'i Hebei no misy anay. Malaza amin'ny harena an-kibon'ny tany izy io. Mahasoa ihany koa ny toerana fitateram-pitaterana azy: 50 kilometatra miala an'i Shijiazhuang (renivohitry ny Faritanin'i Hebei), 200 kilometatra miala ny seranana Tianjin.
Huabang orinasa naorina tamin'ny 1986 sy ny orinasa naorina tamin'ny 2000. manana matanjaka ara-teknika sy ara-toekarena hery: 38 mpiasa amin'ny injeniera, oniversite diplaoma amin'ny fanodinana, fitsapana, varotra, ara-bola, trano fanatobiana entana sy aorian'ny varotra fanompoana tokana, dia nandalo ny iraisam-pirenena ihany koa. fanamarinana rafitra kalitao ISO 9001: 2000.
Ny orinasanay (orinasa) dia nanangana atrikasa ho an'ny fanodinana, tombontsoa, ​​​​famonoana ary fitehirizana, miaraka amin'ny famokarana maoderina sy fitaovana fitiliana sy fitsapana. Ny orinasantsika dia mampiasa tanteraka ny tombontsoa ara-jeografika sy loharanon-karena eo an-toerana, mampiditra teknolojia famokarana maoderina maoderina, mampiasa manam-pahaizana amin'ny indostrian'ny fanodinana simika mba hanatanteraka ny fitantanana siantifika, mametraka rafitra fitantanana multi-sosona, mifehy tanteraka ny kalitaon'ny vokatra, ary miantoka tanteraka ny fotoana fanaterana sy serivisy mifandraika amin'ny fanaterana. Nametraka fifandraisana maharitra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona famokarana ao an-toerana sy any ivelany ary vondrona ara-barotra.
Huabang dia manodina sy mivarotra vokatra mineraly toy ny: tourmaline, mika, cenosphere, diatomacous vovoka, bentonite vovoka, kaolin vovoka, talc vovoka, vy oksizenina, zeolite, manitatra tanimanga baolina, vermiculite, graphite, fibre, pumice vato, seramika baolina, fitaratra blok, loko fasika, ary sira vokatra.
Ny vokatra Huabang dia naondrana tany amin'ny firenena maro, indrindra fa ny Etazonia, Kanada, Japon, Korea Atsimo, Thailand, Frantsa, Failandy, ary Estonia sns. Mitombo isan-taona ny kaonty fanondrananay, satria manizingizina izahay "kalitao voalohany, mpanjifa voalohany".
Ny orinasantsika dia manaraka ny fifanarahana sy ny trosa, mandray ny kalitaon'ny vokatra ho serivisy fototra sy tsara indrindra handraisana anjara amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, mandray tsara ny mpivarotra ao an-toerana sy any ivelany mba hifampiraharaha amin'ny orinasa, miara-miasa amim-pahatsorana ary mitady fampandrosoana iombonana. .